अब आउने‌ सर‌कार‌ले‌ विकृतिको‌ डङ्गुर‌ पल्टाउला ? - विवेचना
अब आउने‌ सर‌कार‌ले‌ विकृतिको‌ डङ्गुर‌ पल्टाउला ?
January 12, 2018 190 Views
नयाँ संविधान अनुसार‌को‌ अब बन्ने‌ पहिलो‌ गणतान्त्रिक सर‌कार‌ ढिलो‌ढिलै‌ भए पनि बन्नसम्मलाई त बन्ला नै‌ ! तर‌ अहिले‌सम्म थुप्रिएका विसंगति र‌ विकृतिका डङ्गुर‌ पन्छाउन-पल्टाउन सक्ला के‌ ? विकृतिको‌ पहाडले‌ कतै‌ सर‌कार‌लाई नै‌ त किच्तै‌न ? आफ्नो‌ बानी को‌ छो‌ड्ने‌, अर्काको‌ बानी को‌ लिने‌ भन्दै‌ डाडुपन्यू बो‌के‌र‌ मझे‌र‌ीमा नाच्ने‌ बुहार‌ीहरुको‌ कथाझै‌ँ हाम्रा पार्टीहरुका ने‌ताहरुले‌ आफ्नो‌ बानी बे‌हो‌र‌ा, गति, मति, प्रवृत्तिको‌ प्रदर्शन गर्न छो‌ड्लान् के‌ ? एउटा हिङ नभए भागै‌ नबस्ने‌, अकोर्‌ हिङ भए भित्रै‌ नपस्ने‌ किसिमको‌ र‌ाजनीतिले‌ कताको‌ विकास कताको‌ आर्थिक सम्बृद्धि ? यी सबै‌ कुर‌ा गफ र‌ भाषणकै‌ विषय मात्रै‌ बन्ने‌ त हो‌इनन् ? जनताले‌ गफ र‌ भाषण पत्याउन छो‌डे‌को‌ धे‌र‌ै‌ भइसके‌को‌ छ । काम गर‌े‌र‌ दे‌खाएपछि मात्रै‌ पत्याउँछन् । नयाँ सर‌कार‌ले‌ काम गर‌े‌र‌ दे‌खाउन सक्ला के‌ ? जनता सावधान भएर‌, चनाखो‌ भएर‌ हे‌दैर्‌छन् । स्मार्ट सिटी बनाइदिन्छु भन्दै‌ मत मागे‌र‌ मे‌यर‌ जित्ने‌ स्थानीय तहका ने‌ताहरुको‌ अलमल, धर‌मर‌, अन्यो‌लबाट सबै‌ सशंकित छन् । स्मार्टसिटी, नयाँ ने‌पालजस्तै‌ र‌माइलो‌ ठट्टा, मजाक बने‌को‌ छ ।
संविधानसभाको‌ निर्वाचनबाट छानिएका ६ सय १ जनाको‌ सभासदको‌ बगाललाई मुलुकले‌ धान्न सक्तै‌न, पाल्न सक्तै‌न भने‌र‌ चिच्याउने‌ जनतालाई अहिले‌ आएर‌ छो‌टे‌ र‌ बडे‌ सांसद गर‌ी झन्डै‌ एक हजार‌ बथान सुम्पिएको‌ छ । उनीहरु यत्रो‌ ठूलो‌ मुख बाएर‌ आइर‌हे‌का छन् । जीवनस्तर‌ उकास्ने‌, आर्थिक सम्बृद्धि गनेर्‌, नयाँ आर्थिक क्रान्ति गनेर्‌ भनिँदै‌ गर‌े‌को‌ तिनै‌ एक हजार‌को‌ निम्ति मात्रै‌ हो‌ कि भने‌र‌ जनताले‌ शंका गर्न थाले‌का छन् । जनताले‌ मत दिएर‌ जिते‌का माननीय र‌ ने‌ताहरुका आफन्त, छो‌र‌ी, बुहार‌ी, श्रीमती, फुपू, प्रे‌मिका, सुनबुढी…. आदि ताननीय अथवा बो‌र‌ामा मुख तुने‌र‌ गिन्तीको‌ लागि लगिएका बो‌र‌े‌ सांसदहरुलाई जनताले‌ नजिकबाट नियाले‌का छन् । ताननीयहरुमा कतिजना टे‌क्नो‌कर््याट छन्, कति विषय विज्ञहरु छन्, कति यो‌जनाकार‌ छन्, कति प्राध्यापक, डाक्टर‌, इन्जिनियर‌, विश्ले‌षक खो‌जी गर‌े‌र‌ गन्न खो‌ज्दा कसै‌ले‌ औ‌ँला भाँच्न पाएका छै‌नन् ।
निर्वाचन भएपछि के‌-के‌ न हो‌ला, जिते‌र‌ गएकाले‌ तुरुन्तै‌ पहाडै‌ सम्याउलान्, सगर‌माथालाई अझै‌ चुल्याउलान्, भाषणमा विकासको‌ मूल फुटाए जस्तै‌ आर्थिक क्रान्ति गर‌े‌ जस्तै‌ काममा पनि कुनै‌ लक्षण दे‌खाउलान् कि भन्ने‌ आशमा बसे‌का जनता जित्ने‌लाई सत्ताको‌ हतार‌ो‌ र‌ हानेर्‌हरु भात पाके‌का बे‌लामा भसेर्‌लीबाट भाग्नु पर‌े‌को‌ ढाडे‌ सो‌ते‌ उज्याउँदा पनि भाग्नुको‌ सट्टा दाँत दे‌खाउँदै‌ नाक बजाएर‌ अटे‌र‌्याइँ गर‌े‌झै‌ँ सत्ताबाट ओ‌र्लिन कस्ट पर‌े‌को‌ दे‌ख्ता चुनावका बे‌लामा गर‌े‌को‌ भाषण ध्वनि प्रदूषण मात्रै‌ र‌हे‌छ भन्न थाले‌का छन् । के‌ही महिना अलिक बिसे‌क भएको‌ बन्द, हड्ताल, चक्काजामले‌ फे‌रि‌ गतिलै‌ गर‌ी गति लिन थाले‌को‌ छ । पहिले‌ जात-जात, थर‌, गो‌त्रको‌ दे‌श मागे‌झै‌ँ अहिले‌ सबै‌का गाउँघर‌, शहर‌मा र‌ाजधानी चाहियो‌ अर‌े‌ ! अस्ति चुनावका बे‌लामा हाम्रै‌ गाउँ ठाउँमा र‌ाजधानी ल्याउँछु भने‌र‌ भाषण डुक्रिने‌हरु नै‌ अहिले‌ बन्द हड्तालका अगुवा बने‌का हो‌लान् । सधै‌ँ बखे‌डा, कचे‌डा, र‌डाको‌, झगडामा र‌माउने‌हरुको‌ निम्ति र‌ाजधानीको‌ विषय र‌माइलै‌ हुँदो‌ हो‌ ! हो‌इन भने‌ लाउनु नि पूर्वदे‌खि पश्चिम, उत्तर‌दे‌खि दक्षिण फिता जहाँ के‌न्द्र हुन्छ, त्यहीँ बनाउनु र‌ाजधानी !
बन्द हड्तालका बलमा जुनसुकै‌ माग पूर‌ा गर‌ाउने‌ प्रवृत्तिलाई निर्वाचनपछिको‌ सर‌कार‌ले‌ तह लाउन सक्ला ? बन्द हड्ताल नगर‌ी कुनै‌ सुनुवाई नगनेर्‌ सर‌कार‌ र‌ स्वार्थको‌ सिस ताके‌र‌ दे‌श र‌ जनताको‌ घाँटी थिच्ने‌ बन्दकर्ताहरुको‌ बाह्रमासे‌ खे‌ल कहिले‌ सकिएला ? सम्पूर्ण कुर‌ाको‌ अन्यो‌ल, अस्थिर‌ता, अर‌ाजकता, मनपर‌ी, उद्दण्डताको‌ मुख्य कार‌ण र‌ाजनीति नै‌ बन्दै‌ आएको‌ छ । र‌ाजनीति आफू नसङ्लिएसम्म अन्य कुनै‌ क्षे‌त्र स्वच्छ भएर‌ सङ्लिँदै‌न । तर‌, र‌ाजनीति सुध्रिने‌ सङ्लिने‌ कुनै‌ लक्षण छै‌न । निर्वाचनपछि पनि ने‌ताहरु आफ्नो‌ पूर्वपर‌म्पर‌ा, संस्कार‌, प्रवृत्ति त्याग्न नसके‌र‌ मझे‌र‌ीमा नाच्न थाले‌छन् ।
अब बन्ने‌ नयाँ सर‌कार‌का अगाडि धे‌र‌ै‌ चुनौ‌ती छन् । यी चुनौ‌तीलाई लाई छिचो‌ल्न सके‌ जनताले‌ परि‌वर्तनको‌ महसुस गर्लान् नत्र उही सत्तासिनहरुको‌ अनुहार‌ परि‌वर्तन मात्रै‌ हो‌ । नयाँ बन्ने‌ सर‌कार‌ले‌ भ्रष्टाचार‌ीहरुको‌ धर्नासो‌ छिनाउनतिर‌ लाग्छ कि आफै‌ँ भाग बस्छ ? यातायातका क्षे‌त्रमा र‌हे‌को‌ सिन्डिके‌टलाई ठे‌गान लगाएर‌ जनतालाई र‌ाहत प्रदान गर्न सक्ला ? मलिला उर्वर‌ जमिनमा र‌ो‌डा बालुवा गे‌ग्य्रान थुपार‌े‌र‌ मरुभूमिकर‌णको‌ बाटो‌ र‌ो‌ज्ने‌ भिटा व्यापार‌ीलाई लगाम लगाउने‌ क्षमता सर‌कार‌ले‌ र‌ाख्ला ? शिक्षा से‌वा र‌ स्वास्थ्य से‌वा नाउँका पसल सटर‌मा पानी छम्किदै‌, छाडा छो‌डिएका यी व्यापार‌ी साहु कै‌याँहरुलाई ऐ‌च्याएर‌ सर‌कार‌ले‌ र‌ाख्न सक्ला ? म्यानपावर‌ नामधार‌ी संघसंस्था व्यक्तिका बे‌इमानी ठगी कमाउ धन्दाले‌ जनता पिसो‌ल्टिएका छन् । यिनले‌ चन्द्र शमशे‌र‌ले‌ समाप्त गर‌े‌को‌ दास प्रथालाई काँचो‌ पल्टाएका मात्र हो‌इन, अझै‌ व्यापक विस्तृत बनाएर‌ विश्वव्यापीकर‌ण गर‌े‌का छन् । नयाँ सर‌कार‌ले‌ सिस्नु पानी लाउन सक्ला ?
ने‌पाली जनताले‌ र‌ाजश्व मात्रै‌ तिर‌े‌र‌ कर्मचार‌ीलाई नबक्साइ कार्यालयहरुबाट सहज से‌वा कहिले‌दे‌खि लिन पाउलान् ? विकास-निर्माण तर्फका ठे‌के‌दार‌हरुले‌ कहिले‌दे‌खि तो‌किएकै‌ समयमा काम सम्पन्न गर्लान् ? बनाइ नसक्तै‌ भत्किने‌ बिग्रिने‌, टे‌डिने‌ संर‌चनाका खबर‌ बाक्लै‌ सुनिन्छ । अब यस्ता ठे‌के‌दार‌लाई कार‌बाही पनि हुने‌ दिन आउलान् ? जनता त सधै‌ँ पर्खिर‌हे‌कै‌ छन्, अब कहिले‌सम्म पर्खिनु पनेर्‌ हो‌ ? र‌ाष्ट्रले‌ चिने‌का ठूला-ठूला कुख्यात भ्रष्टाचार‌ी जो‌गाउन दिलो‌ ज्यानले‌ लाग्ने‌ कतिपय ने‌ताहरुको‌ मति कहिले‌सम्म सुध्रिएला ?
विकास निर्माणका ठूला यो‌जनाहरुमा स्थानीय तिघ्रे‌ पाखुर‌े‌ झ्याले‌ कुन्डले‌ खो‌ये‌हरुले‌ एक डे‌ढ सय वटा पल्सर‌ र‌ पाके‌ट खर्चको‌ माग गर‌े‌ काम गर‌ाउने‌ मान्छे‌लाई नै‌ भगाउने‌ हर्कतको‌ अब निदान हो‌ला ? अहिले‌सम्म पार्टी र‌ पार्टी ने‌ताहरुले‌ छाता ओ‌ढाएर‌ ओ‌ताउँदै‌ आएका तस्कर‌, गुण्डा, डन, ढाटे‌घाटे‌हरु अब नासिएलान् मासिएलान् त ? काम नगर‌ी ढाँटी खाने‌, महिनामार‌ी उठाइखाने‌, ठगी लुटिखाने‌हरुले‌ कहिलदे‌खि काम गर‌ी खान सिक्लान् ? यी सब कुर‌ाको‌ चाँजो‌ नयाँ सर‌कार‌ले‌ मिलाउन सक्ला ? विभिन्न ठाउँमा दाउ लगाएर‌ बसे‌का चिौ‌लियाहरुले‌ जनताको‌ आधा मासु खाइसके‌का छन् । यी विचौ‌लियाहरुमा विष छर्किने‌ आँट अब आउने‌ सर‌कार‌ले‌ गर्छ ?
पार्टी ठे‌उके‌ झो‌ले‌ धुपौ‌र‌े‌ तलका कार्यकर्ताहरुले‌ ने‌ता-मन्त्रीको‌ धक्कू लगाएर‌ गाउँ जिल्लातिर‌ लुटपाट गर्न छो‌ड्लान् ? यस्तै‌ यस्तै‌ सुमर्न बिते‌काहरुलाई सुमर‌े‌र‌ के‌ही न के‌ही परि‌वर्तनको‌ छनक अब आउने‌ नयाँ सर‌कार‌ले‌ दिन सक्नुपर्छ । यी सबै‌ विसंगति र‌ विकृति यथावत र‌हिर‌हे‌ भने‌ नयाँ जनादे‌शको‌ नयाँ सर‌कार‌ भने‌र‌ मात्रै‌ के‌ गर्नु ? त्यसै‌ले‌ नयाँ सर‌कार‌को‌ गति मति प्रवृत्ति जनतामा प्रत्याभूत हुने‌ गर‌ी परि‌वर्तन हुन सक्नुपर्छ । अरु सबलाई ठे‌गान लाउन सबै‌भन्दा पहिले‌ आफै‌ँ ठे‌गानमा बस्नुपर्छ ।
घुस नखाने‌, बे‌इमान नगनेर्‌ इमानी हाकिमलाई कार्यालयकै‌ कर्मचार‌ीले‌ अने‌क तिकडम लगाएर‌ खे‌द्छन् । धामीले‌ मसान खे‌लाएझै‌ँ तस्कर‌ माफिया चलाउन खे‌लाउनतिर‌ नलाग्ने‌ हाकिमको‌ पनि तुरुन्तै‌ सरुवा हुन्छ । इमान्दार‌साथ काम गनेर्‌लाई कामचो‌र‌ ठगहरुले‌ गिल्ला गर्छन् । यस्तै‌ उभिण्डो‌, बिब्ल्याँटो‌, डे‌उडो‌ चलन मौ‌लाएको‌ छ । इमान्दार‌ मान्छे‌लाई समय अनुकूल भएन भन्छि । बहुमतको‌ शासन चल्ने‌ ठाउँमा बहुमत चाहिँ चंखे‌ चतुर‌े‌हरुका उल्टा उभिन्डा कुतर्कका पछाडि सबै‌ दौ‌डिनु पनेर्‌ हो‌ कि यिनलाई गो‌खेर्‌लौ‌र‌ी लाउने‌ कुनै‌ उपाय छ ? आउने‌ सर‌कर‌ाले‌ यस्त्ा उपाय लिएर‌ आउनुपर्छ । नत्र कुकुर‌ले‌ पुच्छर‌ हल्लाउने‌ हो‌इन, पुच्छर‌ले‌ सधै‌ँ कुकुर‌ हल्लाइर‌हन्छ । अब आउने‌ सर‌कार‌ले‌ वषौर्‌ंवर्षदे‌खि थुप्रिएको‌ डङ्गुर‌ पल्टाउला ? उकुच पल्टिएका समस्याहरुको‌ निदान हो‌ला ? विकृतिको‌ पिलो‌मा आर‌ो‌ हान्न सक्ला ? जनता पर्ख र‌ हे‌र‌मा छन् । र‌ाजनीतिका धे‌र‌ै‌ आर‌ो‌ह, अवर‌ो‌हपछि, क्रान्ति संघषपछि पनि परि‌वर्तनको‌ अनुभूति गर्न नपाएका सर्वसाधार‌ण जनताले‌ वामगठबन्धनपछि तै‌ के‌ही भइहाल्छ कि भन्ने‌ झिनो‌ आशा र‌ विश्वास बो‌के‌का छन् । यो‌ आशा र‌ विश्वासमा ग्रहण नलागो‌स् ! अहिले‌सम्म ने‌ता कार्यकर्ता हाकिम प्राविधिक प्रशासकहरु बनिए अब दे‌श बनाउँ !
Previous सर्जमिन हेर्नेको‌ घुइँचो‌
Next डिम्पललाई दे‌खे‌पछि र‌मे‌शको‌ ब्रे‌क फे‌ल